प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘चेस गुरु’ मान्ने सीईओ रमेश काफ्लेको जीवनको बहुरङ्गी पाटोः राजनीतिदेखि वकिलसम्म, सीईओदेखि साहित्यसम्म:: Artha Dabali
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘चेस गुरु’ मान्ने सीईओ रमेश काफ्लेको जीवनको बहुरङ्गी पाटोः राजनीतिदेखि वकिलसम्म, सीईओदेखि साहित्यसम्म
यात्राः काफ्लेथोकदेखि काठमाडौंसम्म, सपना प्रोफेसरको, लगानी वकालत र राजनीति
अहिले जुन जहाँ छु त्यहाँ जीवनको धेरै उकाली ओराली गरेर आइपुगेको हुँ । व्यवसायिक गुण भनौँ या महत्वाकांक्षा या त मेरो केही गरौं भन्ने सपना/आकांक्षाले हुनसक्छ । म कहिले व्यवसायी बनेर चिनिएँ । कहिले राजनीतिकर्मी । कहिले वकिल त कहिले साहित्यकार पनि । यी सवै परिचय मेरा जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन जस्तो लाग्छ ।
एक समय थियो । आफ्नै लगानीमा पनि व्यवसाय गरेँ । विजुली पसलदेखि डेरी व्यवसायसम्म गरेँ । यसरी नै अघि बढ्यो / छुट्यो । मेरा लेखनहरुमा पनि यस्तै जीन्दगीका कुराहरु देखिन्छन् । जसले लेखनमै सहयोग गर्यो । कहिलेकाही म नोष्टाल्जिक हुन्छु पनि ।
तनहुँको जामुनी ८ काफ्लेथोकबाट निस्केको मान्छे म पिएन क्याम्पस हुँदै २०४३ सालमा काठमाडौँ आईपुगेको हुँ । त्यो समय खुवै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएँ । देशको मुहार बदल्ने अभिभारा मेरो काँधमा पनि थियो । सायद मैले पनि त्यहि भूमिका निभाएँ भन्ने लाग्छ । काङ्ग्रेसको सत्याग्रहको मुभमेन्ट । प्रगतिशील बिचारबाट अभिप्रेरित मेरो सपना काठमाडौं खाल्टोमा पनि आगोको लप्का जस्तो तातो रवाफिलो थियो ।
तत्कालिन समय आन्दोलनकै शिलशिलामा पिएन क्याम्पसबाट म लगायत एउटा टिम नै पक्राउ परेको थियो । गणेश तिमिल्सिना, खगराज अधिकारी, तुलबहादुर गुरुङ, हितकाजी गुरुङ, देवराज चालिसे, यज्ञ बहादुर थापा लगायत साथीहरुसँग म पनि २०४२ सालमा पोखराको जेलमा थिएँ । हो, त्यहि समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि जेल ट्रान्सफर भएर पोखरा पुग्नुभएको थियो । करिब पाँच महिना एउटै जेलमा बितायौं । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)सँग धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि पायौँ । मलाई सम्झना छ, उहाँ असाध्यै राम्रो चेस र क्यारेमबोर्ड खेल्नुहुन्थ्यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने मेरो चेसको गुरु नै उहाँ हो ।
विद्यार्थी कालमा राजनीतिमा निकै सक्रिय भूमिकामा थिएँ तर पछि विस्तारै यो क्षेत्रसँग वितृष्णा जाग्यो । मैले सोचेको सपना र यहाँ हुने खेलबाजी तिकडम फरक लाग्यो । २०४६ सालको आन्दोलनले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यस्तै, २०५०/ ०५१ सालमा आइपुग्दा फेरि राजनीतिमा अर्को मोड आयो । ३० वर्षे पञ्चायत शासनलाई फाल्ने भनेर जुन विद्यार्थी राजनीति गरियो । पछि त्यहि पञ्चायतका हस्तीहरु लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा जस्ता हिमायतीहरुको नेतृत्वमा सरकारमा जानुको कुनै औचित्य देखिएन अर्थात भनौँ मैले देखिन । त्यसका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरियो । जनताको आशा र भरोसामा कुठाराघात भएको महसुस गरेँ । यसै क्रमसँगै विस्तारै–विस्तारै राजनीतिबाट अलग्गिएँ । तत्कालिन समय पार्टीको तनहुँ काठमाडौँ सम्पर्क कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाएँ । त्यस्तै, गण्डकी अञ्चल संयोजकसम्म भएँ । विद्यार्थी जीवनमा प्रोफेसर हुने इच्छा थियो । नेपाल ल क्याम्पस, आरआर क्याम्पसको वातावरण र संगतले मलाई वकिल हुने र राजनीतिक व्यक्तित्वतिर तानेको हो ।
लेखनः समाजको ऐना, मूल श्रोतः जीवनको भोगाई र अनुभुति
लेखन यात्रा कहिलेबाट शुरु भयो भन्ने कुरा खास एकिन नभए पनि लगभग २० वर्ष अघिदेखि सिर्जनाकर्ममा पनि छु । कथा लेखनबाट शुरु गरेको साहित्य विधातर्फ कविता गजल मुक्तकमा बढि दिलचस्पी बढेको छ । व्यवसायिक जीवन, समयको कारण समाजमा आफूले देखेको कथावस्तुलाई छोटा सरल विधाहरुमा उन्ने मेरो कोशिस हो । त्यसरी पनि भावनालाई व्यक्त गर्न सकन्छ भन्ने मेरो बुझाई पनि हो । अर्को कुरा, मानिसको आजभोलि कलमभन्दा धेरै औला चल्छन् ।
किर्वोर्डहरु थिचिन्छन् । यसले छोटो समयमा छोटो शब्दमा धेरै भाव व्यक्त गर्न सकिने हुँदा म कविता विधातर्फ आकर्षित भएको हुँ । आफूले देखे/भोगेको दृश्य घटनाहरुमा आधारित भएर शब्दमा उत्रिन्छन् । र जसलाई फुर्सदमा परिष्कृत गर्न पनि मिल्छ । म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले पनि होला त्यस्ता विषयमा आधारित लेखहरुमा पनि कलम चलाउँछु । वा भनौँ सिर्जनाहरु पनि त्यस्ता लयले समात्छन् ।
व्यस्त जीवन, व्यस्त समाज कसरी लेख्ने ? मन भएपछि व्यस्तता भित्रबाट कसरी/ कसरी फुर्सद आफैं आउँछ । आउँनुपर्दछ । यसैले लेख्छु । लेखन कर्ममा लाग्दा तनाव विर्सजन गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ । फ्रेस हुन्छु ।
पढाएका विद्यार्थीहरु विभिन्न क्षेत्रमा छरिएको देख्दा शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित थिएँ । तर, शिक्षक वुवा भने दुःख हुन्छ भनेर यता नआउन अभिप्रेरित गर्नुहुन्थ्यो । दिनभरी काममा व्यस्त हुन्छु । साँझ गुडँमा फर्किसकेपछि भने एकान्त हुन्छ, एक्लो महसुस हुन्छ । दिनभरीको अनुभूतिहरुले सिर्जनात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ । विशेषगरी यात्रामा निस्केको समयमा साँझको समय एकान्त हुन्छ । कतिपय मानिसहरु यात्रामा भएको रमाइलो गर्न मन पराउँछन् तर म भने त्यो समयसिर्जना साधनामा लगाउछु ।
जीवनको दोस्रो पाटोः विवाह, विजनेस, कर्पोरेट व्यवस्थापक
मेरो विवाह २०४५ सालमा भएको हो । अध्ययन चलिरहेकै थियो । २०५० सालमा कानुनमा ग्रयाजुयट गरेँ । त्यसपछिको केहि समय वकालत । मास्टर्स अध्ययन शुरु गरेपछि भने विकृत राजनीति छोडेर पेशा व्यवसायमा तानिएको हुँ । शुरुको पाँच/सात वर्ष कानुन व्यवसायीकै रुपमा चिनिएँ । वकालतभित्र पनि मैले कर्पोरेट सेक्टरलाई बढि महत्व दिएँ । यहि क्रममा गोर्खा ब्रुअरीमा प्रशासकको रुपमा आबद्ध भएँ । यहिँ उडानमा एनएस, केडिया, चौधरी ग्रुप तथा अन्य कर्पोरेट कम्पनीहरुसँग जोडिएँ । जहाँ–जहाँ रहेँ कर्म र आत्मविश्वास बढाएँ, अनुभव लिएँ । हाल म क्लासिकल ग्रुपमा आवद्ध छु । कुशलताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । आयातित वस्तुको तुलनामा आफ्नो विश्वास एक्स्पेरियन्सले पनि अघि बढिरहेको छुँ । स्वदेशी उत्पादनप्रति नेपालीको मोह जगाउनुपर्दछ । हुनु पर्दछ । मेरो मूख्य ध्येय हो । एक समय थियो पार्टीका भातृ सङ्गठनहरुको आन्दोेलन । सधैँ उद्योगहरुमा समस्या ।
मजदुर नेताहरुसँग म जहिल्यै भन्थेँ ‘जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम बनेको संस्थालाई बचाउँनुपर्छ । संस्था बचे मात्रै प्रतिफल पाउने हो ।’ मजदुरहरुको लागि आन्दोलन भन्दै उद्योगहरु धरासायी बनाए कसरी देश समृद्ध हुन्छ मेरो सधै यहि भनाइ हुन्थ्यो । यस्तो सम्म विकृत देखेँ व्यवस्थापन पक्ष वास्तविक मजदुर मिल्ने पक्षमा भए पनि राजनीतिक लेनदेन र टकरावले तेस्रो पक्षले मिल्न दिदैन थिए जुन कुराको अनुभव मैले गरेको छु । कतिपयलाई मजुदुरका नीति नियम र अधिकारसँग भन्दा आफ्नो पद पैसासँग मात्र महत्व हुन्थ्यो । यसैले होला सायद नेपालको मजदुरको अवस्था अझै समस्या ग्रस्त छ । मजदुर र व्यवस्थापन पक्षको बीचमा पनि विचौलियाले भूमिका खेल्दा मजदुर जहिल्यै पिल्सिए । फुटाउने उनीहरु नै । जुझाउने पनि उनीहरु नै हुन्थे ।
सहित्य : जीवनदर्शन
साहित्य एक जीवन अनुभुति समाज दर्शन नै रहेछ । कविताले समाजमा धेरै राम्रो सन्देश दिन्छ । व्यक्तिले देखे–भोगेको वा अनुभुत दृश्यहरु नै हुन् ति कविताहरु पनि । एउटा कवितामा यसैले त एउटा सिङ्गो समाज उभिएको हुन्छ त्यहाँको जीवन बोलेको हुन्छ । कयौं आन्दोलनका नारा छन् कविता । आन्दोलनका उठानहरु छन् कविता । मानिसका रङ्ग–रङ्गका जीवन चरित्र छन् यसैले निकै ठूलो शक्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ कविता समाज परिवर्तनको एउटा कारण बन्न सक्छ ।
लेख्छु भनेर लेखिने विषय होइन कविता । विषय क्षेत्र वस्तुले मानसपटलमा प्रभावित पारेपछि उत्प्रेरित भएर जन्मने रहेछ क्यारे कविता । तत्कालिन समयको कविताहरु क्रान्तिकारी भावका हुन्थे । लेख्ने र वाचन गर्ने शैली पनि त उस्तै हुन्थ्यो । कतिपय लेखिएर त्यतिकै थन्किए । कतिपय फुटकर रुपमा प्रकाशित छन् । ‘सेन्सर’ को कारण त्यसबेलाका कतिपय अप्रकाशित भए । त्यस्तै मञ्चहरुमा वाचिए । गाइयो यसरी नै रहे मेरा कविताहरु । अहिले साथीहरुको प्रेरणाले नै मलाई एउटा कविताको सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । हिजो कविताहरु क्रान्तिकारी भाव युवा जोशले भरिएका शव्द हुन्थे । अहिले पनि समाज सापेक्ष छन् । जुन समसामायिक व्यवहारिक समाजमा सकारात्मक सन्देश बोकेका आशाबादी शब्दहरुले भरिएका हुन्छन् । धर्म भन्दा कर्ममा विश्वास गर्छु । भगवान प्राकृतिक शक्ति हो भन्ने लाग्छ त्यसैले यो शक्ति आवश्यक छ । यसलाई नै धेरै मानिसहरुले भगवानको उपमा दिइएको हो जस्तो लाग्छ ।
परिवर्तित समय टेक्नोलोजी अनुसार चल्नै पर्दछ । आफुलाई सधैँ विद्यार्थी मान्छु । आफ्नो पेशासँगै अध्ययन, लेखन र कामलाई सँगसँगै लाने योजनामा छु । सामाजिक साहित्यिक समूहहरुमा आवद्ध छु । यसैमा सक्रियता निभाउँदै आएको छु । परिवारमा गज्जवको माहोल छ । दुई छोरी छन् । सबै साहित्यमा रुचि राख्छन् । साहित्यप्रेमी छन् । लेखनमा प्रेरणादायी वातावरण छ् । मेरी श्रीमती साहित्यप्रति निकै रुचि राख्छिन् । उनी एक कुशल कथाकार पनि हुन् । सायद उनकै प्रेरणाले सक्रिय छु । त्यस्तै, छोरीहरु पनि । पारिवारिक वातावरण नै साहित्यमय छ । मैले लेखेको कविता सबैभन्दा पहिले म आफ्नै परिवारलाई सुनाउने हुँ । छोरीले मलाई करेक्सन गर्न सुझाव दिन्छिन् ।
सायद जीवन भनैकै यहि आनन्द रहेछ सायद । खुशी छु ।
क्लासिक इडष्ट्रिजका सीईओ रमेश काफ्लेले विभिन्न समय र सन्दर्भमा कोरेका विशेष तीन कविता यस्तो छ :
घाम जस्तो थियो
फूल जस्तो थियो
फैलिएछ शून्यता ।
काँप्छन् हातहरु ।
खै किन रु
केहि भए जस्तो
केहि खोसिए जस्तो
केहि लुटिए जस्तो
केहि गुमाए जस्तो
आत्मा नै त्यसै
लुटिए जस्तो ।
2. जीवन साथी
उनी हुन् जीवन संगिनी
उनी नै जीवन तरंगिनी ।
जो विना जीवन अपूर्ण,
हुन्छ साथ सँधै अटुट ।
तिनी हुन् अर्धाङ्गिनी,
उनी नै जीवन संचारणी ।
जसको साथ विना,
हुन्छ सन्तान विहिन ।
उनकै सहयोगविना पुरुष,
हुन्छ सधैं अस्तित्व विहिन ।
हुन् यिनी अनन्य मित्र,
यिनी हुन् जीवन चित्र ।
जस विना हुदैन पूर्ण,
आकांक्षाहरु अनि आशा ।
खुशी अनि अभिलासा ।
हुन यिनी ममताको खानी,
शान्ति अनि भोजनदायनी ।
यिनै हुन् मार्गदर्शिता,
सवैकी सतत् द्रष्टा ।
मिल्दैन उनको साथविना,
जीवनमा अनन्त शक्ति ।
जसको साथ र हात नै हो,
परिवारको पूर्णता र भक्ति ।
देखिदैछ दुकानमा आज फेरि भिड
दौडेँ म फेरि धक्का मार्दै त्यतैतिर
पुगें त्यहाँ देखाएँ आफ्नो अनुहार
छैनन् विकल्प वस्नु लाइन वेगर ।
छन्, त्यहाँ वाल, बृद्ध अनि महिला
भन्छन् हो म आएको यहाँ पहिला
ठुलै उपकार गरे सरी दूकान साहूले
भने लिइ पैसा नाम लेखाउनु पहिले ।
पाउने देखिन्थे खुशी अरु सवै निरास
आएपछि पठाउनु है तपाइको निवास
धिक्कारुँ कसलाई म पसले कि सरकार
जवाफदेही छैन कोही गरुँ कहाँ पुकार ।
भयो जव सुर्यास्त फेरि लागेँ म दूकान
मौका छोपी एकान्तमाउनैलाई फकाउन
तेत्तिमा सक्दिन म दिनुस पैसा बढाएर
दिएँ बढि पाएँ मैले, भएन त भ्रष्टचार ।